Ibhegi epholileyo ye-40-i-LINTFFEICTFEICTED PHEALED CB011 | Zone
Zangaphandle bag inkampu icooler 8L IB001-8
Ibhegi epholileyo ye-40-i-LINTFFEICTFEICTED PHEALED CB011
1.Ukusebenza: Ingxowa yethu epholileyo inokubangela i-20lililiters, ungathatha i-16cans ye-overs yakho oyithandayo. Ubungakanani bonke buba malunga ne-30 x 18 x 24cm (l x w x h).
I-2.ight-Densing Line Line: i-Light Lineng: Ingxowa engaphandle yengxowa yakhiwe kwilaphu le-Oxford elenza liqine. Ukuphuculwa kulwakhiwo lokuthunga ngokwesiko, icandelo elisezantsi lamkela itekhnoloji yokucinezela i-chtring ukudibanisa i-ling ngaphandle.
3. IXA LOKUSETYENZISWA KWEXESHA LOKUSETYENZISWA: Kukho i-210D ye-Oxford I-Oxford ye-Oxford kunye ne-EPE Will ukugcina izinto ziqinisekile ukuba zinokuqiniseka ukuba zisetyenziswa ixesha elide. Ingasetyenziselwa iinkonzo zokuhanjiswa kokutya kunye nesisombululo esikhulu sokutya ukutya kwivenkile yevenkile.
I-SODFALERLE DECKER kunye nepokotho ezininzi: Ixhotywe ngepokotho eyi-1 ePhezulu, iipokotho ezi-2, kunye neepokotho ezi-1 zangaphambili, iipokotho ezininzi zinokuhlangabezana nezinto ezahlukeneyo zokugcina izinto ezahlukeneyo. Ingasetyenziselwa ibhegi yakho ye-Duffel.
I-5.4ded ngesiphatho esipapashiweyo kunye neglasi ebonakalayo enikezela ngeetayile ezi-3. Unokukhetha ukuthwala ngesandla okanye uphathe ngombhobho wamagxa. Unokuyibeka le ngxowa kwityesi yakho yokuhamba.
Sebenzisa ukusetyenziswa kwe-6.Prestalile: Le ngxowa epholileyo inokupakishwa ngesidlo sasemini kunye neepakethe ezimbalwa zekhephu, kwaye zinokubekwa kwisiqu sakho. Xa uthatha ukuhamba ngenqwelomoya, inokusonga ithe tyaba kwaye ipakisha kwisutikheyisi yakho.
7.Ukugqitha uyilo oluPhezulu oluPhezulu, ngokulula ngakumbi ukuthabatha iziselo, ukuhamba kunye nokuqhuba ngakumbi